Aqoonsiga Trump ee Quddus oo khatar geliyey la dagaalanka argagixisada | Raadgoob
HARGEYSA(RGN) Aqoonsiga uu madaxweyne Donald Trump u aqoonsaday Quddus inay tahay caasimadda Israa’iil ayaa dhaliyey dhaliil aad u culus oo ka timid saaxiibada Ameerikaanka.
Dalka Baxrayn oo uu ka socdo shirweynaha sannadlaha ah ee wadahadallada amaanka, ayaa waxaa ka jira in ka soo qayb galayaasha dhamaantood ay walaac ka qabaan in dhawaaqaas uu fursad siinayo labada qolo ee gobolka mucaaradka ka noqday – Iran iyo jihaadoonayaasha Al Qaacida oo dhinac ah, iyo kooxda loogu yeero dawladda islaamiga (IS).
“Madaxweynuhu dab ayuu shiday, wuxuuna saaxiibadiisa carbeed u dhaafay inay la tacaamulaan ololka” sidaa waxaa tiri Elizabeth Marteu, oo ka tirsan machadka caalamiga ah ee daraasaadka istaraatijiyadeed (IISS).
Sarkaal hore uga tirsanaa ciidanka gaarka ah ee UK, oo dalbaday in aan la soo xigan, ayaa dhawaaqaas la mid dhigay “sidii bam gacmeed inta biinka laga baxshay qol lagu dhex tuuray”.
Si gaar ah laakin marka loo fiiriyo, xubnaha da’da ah ee qoysaska xukunka haya marnaba kama aysan cafin hiilkii uu maamulka Falastiiniyiinta siiyey Saddaam Xuseen markii uu qabsanayey Kuwait 1990.
In yar ka dib markii dalkaas la xoreeyey, ‘waxaan arkay’ ayuu yiri ninka faalladan qoray ‘qoraal darbi ku yaalla magaalada Kuwait City oo leh’ “Quddus waa hoyga daa’imka ah ee Yuhuudda, aniga wax qorayana waxaan ahay qof u dhashay Kuwait”.
Khatarta labaadna waxay tahay in qofkii markii hore la shaqaynayey hay’adaha dawladda Maraykanka uusan iminka dhankaas u janjeerin.
Jamhuuriyadda islaamiga waxay weli sii waddaa inay awood ahaan iyo sharaf ahaanba Sacuudiga kula tartanto gobolka. Muddo dheer waxay taageero siin jirtay laba miliishiyo oo ku kacsan Israa’iil oo kala ah Xisbullah iyo Xamaas.